अनुहारको छालालाई चम्किलो र कोमल बनाउन भान्सामै बनाउनुहोस् यी ३ घरेलु औषधि ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/अनुहारको छालालाई चम्किलो र कोमल बनाउन भान्सामै बनाउनुहोस् यी ३ घरेलु औषधि !
मह र टमाटरले अनुहारमा आउने चाउरी र बुढोपन हटाउन मद्दत गर्छ । यसको प्याक बनाउनका लागि आधा कप टमाटरको लेदोमा १ चिया चम्चा शुद्ध मह मिसाउने र अनुहारमा लगाउने । १५ मिनेटसम्म उक्त प्याक अनुहारमा राखेर चिसो पानीले मुख धुने ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
यी तीनै उपायले छालामा कोलेजन उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ । यसले अनुहारमा आउने चाउरीलायृ समेत कम गर्छ भने अनुहारमा आउने विभिन्न समस्या पनि कम गर्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
भारतीय चर्चित क्रिकेटर सौरभ गांगुलीको परिवारमा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टी, सौरभ क्वारेन्टाइनमा
यि हुन् चितवनमा ठेला रिक्सा बेचेको आरोपमा मरणाशन्न हुनेगरी कुटपिट गर्नेहरु, जसले राजकुमारको हत्या गरेर बोरामा बाँधेर फालेका थिए